Home Wararka Qaar kamida Mid. Musharaxiinta oo guluf ugu jiro in la fasaxo kursiga...
Qaar kamida Mid. Musharaxiinta oo guluf ugu jiro in la fasaxo kursiga Fahad
Waxaa labadii malin ee u danbeeysay ka socday magaalada Muqdisho da’daalo ay wadaan qaar kamida xubnaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya kuwaas oo doonaya in deg deg lagu fasaxo kursiga uu xayiray guddiga doorashada ee uu kusoo baxay Fahad Yaasiin, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Kheyre, Dahir Maxamuud Geele, Cabdikariin Xuseen Guuleed ay wadaan dadaallo la doonayo in shahaadada xildhibaan lagu siiyo Fahad Yaasiin.
Xubnahan ayaa ku dooday in khilaafkan uu horseedi karo khilaaf cusub oo natiijadiisu noqoto dib u dhac kale oo ku yimaada dhameystirka doorashada golaha shacabka, taasi oo aanay cidna dan ugu jirin.
Kursiga Fahad ayaa la rumeysan yahay inuu is-hortaagay ra’iisul wasaare Rooble oo kaashanaya guddiga doorashada, taasi oo qeyb ka ah dagaalka siyaasadeed ee kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Fahad.
Musharaxiintan ayaa waxaa horey u jiray warar sheegaya inay yihiin qorshaha labaad ee Fahad iyo Qatar, haddii madaxweyne Farmaajo aanu yeelan rajo badan oo uu dib ugu soo noqdo xilka madaxweynaha, si gaar ahna Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre.
Waxaa jiro war aan qarsoodi lahayd oo dadka oo dhan aogyihiin kaas oo ah in Fahad Yasin uu si toos ah dhaqaale u siiyo Shiikh Sharif Shiikh Axmad, taas oo ujeedada laga lahaa ay ahayd in lakala jabiyo mucaaradka Farmaajo.
Kursiga Fahad ayaa ku jira mugdi badan, waxaana fashilmay qeyb ka mid ah qorshe ay maamullada HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed ku qaadici lahaayeen in xildhibaanada ay shahaado ka qaataan guddiga doorashada, kadib markii xubno laga soo doortay maamulladaas shahaado la siiyey.
Haddii xubnaha harsan badankood ay sidoo kale shahaado qaataan, alabaabka kaliya ee u furan Fahad ayaa noqonaya inuu helo xal uu guddiga doorashad uga helo shahaadada xildhibaannimo.
Waxaa sidoo kale jiro xildhibaano garab la ah Midowga Musharaxiinta oo uu Fahad u balan qaaday in uu siinayo lacag badan hadii Rooble lagu qanciyo in uu sii daayo kursiga Fahad. Ragaas waxaa kamida Mahad Salaad oo dadka u muujiya inuu yahay cadow ka soo horjeeda dowlada Farmaajo habeenkiina u dhuunta Fahad Yasin.
Previous articleBoqor Buurmadow “warka ka soo yeeray Rooble waa ku digasho iyo aflagaado”
Next articleKenya Expresses Solidarity With Somaliland Following Devastating Hargeisa Market Fire
Somaliland oo kulankii maanta u isticmaashay iibinta qadiyadeeda (Sawiro)
Dhoobo-Daareed oo guluf siyaasadeed ka bilaabay gobolka Sanaag (Aqriso)